Mitaky fanajana sy fanomezan-danja azy ireo ny Zokiolona | Région Boeny
Mitaky fanajana sy fanomezan-danja azy ireo ny Zokiolona
3 octobre 2014 A La Une, Actualité
“Fiaraha-monina ho an’ny sokajin-taona rehetra”. Tokony hifanaraka amin’io loha-teny nomena ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Zokiolona 2014 io ny fanajana sy ny fanomezan-danja ny maha olona efa nahazo taona azy ireny. Izay no voalazan’ny Filohan’ny Fikambanan’ny Zokiolona eto Mahajanga na APA (Association des personnes âgées) tao amin’ny Biraon’ny sampandraharaham-paritry ny Mponina eto Mahajanga nandritra ny fankalazana ny andron’ny 01 oktobra 2014 lasa teo.
Nankalazaina io andro io ihany koa ny faha 15 taona niorenan’ny APA teto Mahajanga izay misy mpikambana arivo mahery ankehitriny. Filaharana namakivaky ny tanàna sy kabary nifandimbiasana narahina fizarana solon-tsakafo ho an’ireo Zokiolona teto an-tanàna no nanamarihana izany.
Niangavy ireo manam-pahefana ny APA mba hanamora ny fahazoan’ireo Zokiolona ny kara-maitso sy ny fampiharana ny fampihenana ny saram-pitaterana sy ny fanafody ho azy ireo. Fangatahan’izy ireo koa ny hanavaozana ny Ivon-toerana fialam-boly ho an’ny Zokiolona eto Mahajanga mba ho tena toerana mendrika izany ilay trano “satria izahay mbola manana zo hifaly sy hiala-voly ary mbola manana fiainana eo amin’ny fiarahamonina” hoy izy ireo.
Ny Talem-paritry ny mponina eto Boeny kosa dia nampatsiahy fa eo amin’ny dimy isan-jaton’ny mponina no isan’ny Zokiolona eto Madagasikara ka tsy tokony hatao ambanin-javatra eo amin’ny sosialimbahoaka ny fisian’izy ireo.
Nanohina ny fangatahan’ny APA avy hatrany ny avy ao amin’ny Kaomina Mahajanga raha nanambara fa ho ampiharina manombok’izao ny antsasaky ny saram-pitaterana ho azy ireo eny amin’ny bus eto an-tampon-tanàna.
Ankilan’izay dia hanao fihaonambe ho an’ny fanatsarana ny fiaraha-monina ny Faritra Boeny hamerenana ny soatoavina malagasy araka ny voalazan’ny Talem-paritry ny fampandrosoana ny faritra, ary hisy ny fananganana fikambanambe iray hisahana manokana izay soatoavina izay ary voakasik’izany indrindra ny momba ireo Zokiolona.